MM Qabridahar Iyo 526 Arday Oo Ka Qalinjabisay Kuliyada Xirfadaha Iyo Farsamooyinka Gacanta - Cakaara News
MM Qabridahar Iyo 526 Arday Oo Ka Qalinjabisay Kuliyada Xirfadaha Iyo Farsamooyinka Gacanta
Qabridahar(cakaaranews)Axad 12ka March 2017. Xaflad ay si wada jira ah usoo agaasimeen kuliyada xirfadaha iyo farsamooyinka gacanta iyo kuliyada caafimaadka MM Q/dahar islamarkaana ay ku qalinjabinayeen 526 arday oo bartay xirfadaha kaladuwan ee sida furnitureska birta iyo alwaaxa, cunto karinta iyo laxamaadaha kaladuwan ayaa si rasmi ah uga dhacday MM Qabridahar.
Hadaba, xafladan qalinjabinta ah ayaa waxaa furitaankeedii khudbad kasoojeediyay Wasiirka Xafiiska Tababarda, Xirfadaha iyo Farsamooyinka Gacanta DDSI mudane Naasir Xasan Cabdi oo ugu horayn u hanbalyeeyay dhamaan qalinjabiyayaasha iyo waliba maamulka iyo macalimiintiii ardaydan waxsoobaray. Wuxuuna xusay in ardaydan qalinjabisay ay mid katahay tubaha lagaga baxayo saboolnimda islamarkaana larabo in dalku kaga mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa kubuuriyay qalin jabiyayaasha in ay noqdaan kuwo ficil kumuujiya cilmigii aybarteen islamarkaana ugu shaqaysta si daacad ah kadib markii ay ku noqdaan degmooyinkii ay kakale yimaadeen.
Sidookale, waxaa isna xafladan kahadlay Maareeyaha Xarunta Xaqiijinta Tayada Xirfadaha kaladuwan (COC) ee DDSI mudane Mubaarak Axmed Maxmed oo isna dhankiisa u diray hanbalyo dhamaan qalinjabiyaaasha. Wuxxuna xusay maareeyuhu in ardaydani tahay arday si fiican lo xaqijayay tayadooda islamarkaana ay yihiin arday competence ah. Wuxuuna ku booriyiyay in ay barashada xirfaduhu ay yihiin dhiigjooojin islamarkaana qof aan xirfad aqoonin uusan waxba ahayn.
Dhankakale masuuliyiintii kuliyadaha caafimaadka iyo kuliyada xirfadaha ayaa iyana dhankooda khudbado kaladuwan kasoojeediyay oo taabanaya dhinacyo kaladuwan.
Ugudanbayna qalinjabiyaashii oo dareenooda kahadlay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin xirfadhan kaladuwan ee ay barteen kuna barteen wakhtiga gaaban ee 45 ta maalmood ah. Waxayna balan qaadeen inay si daacada ugushaqaynayaan degmooyinkii ay kakala yimaadeen.